Immunoglobulin (anti-mahazaka), dia molekiola glycoprotein vokarin'ny sela sela fotsy. Ny antibody immunoglobuline dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fitadiavana sy ny fanatonana ny tenany amin'ny antigène sasany toa ny bakteria sy ny virus. Ireo antibody ireo ihany koa dia mandray anjara amin'ny famotehana ireo antigène. Noho izany, izy ireo dia mandrafitra singa fiadiana fiarovana lehibe.
Misy karazana immunoglobulin dimy lehibe amin'ny biby mampinono in-placenta, arakaraka ny habe miovaova asidra amina aseho hita ao amin'ny faritra miovaova mahery ataon'ny antibody. Anisan'izy ireo ny IgA, IgD, IgE, IgG ary koa ny antibody IgM. Ny karazana antibody tsirairay ireo dia manana rafitra miavaka, noho izany dia fiasa tokana sy valiny amin'ny antigènes.
Ny antibiôtana IgA dia miorina amin'ny faritra be fihetseham-po be loatra izay trandrahana ivelany avy any ivelany. Anisan'ireny faritra ireny ny orona, ny rivotra, ny làlam-pandevonan-kanina, ny fivaviana, ny sofina ary ny maso koa. misy tsiranoka, ranomaso, ary ra koa dia misy ny antibody IgA
Etsy ankilany, misy antibiôtinina IgG dia misy tsiranoka an'ny vatana. Ny antibody IgM dia hita ao amin'ny ny rà sy ny tsiranoka mafana.
Ny antibody IgE dia mipetraka ao anaty havokavoka, hoditra, ary koa ny membrane moka. Farany, ny antibody IgD dia hita ao amin'ny tavy amin'ny vavony sy ny tratrany.
Eto isika dia hifantoka amin'ny IgG.
Inona no atao hoe Immunoglobulin G (IgG)?
Immunoglobulin G (IgG) dia monomer; ny karazana antibody mora indrindra indrindra ao amin'ny serum an'ny olombelona. Ankoatra izany, mitahiry 75% ny immunoglobulin iray ao anaty vatan'olombelona iray, io no karazana immunoglobulin lehibe indrindra ao amin'ny olombelona.
Ny sela fotsy fotsy dia mamoaka ireo antigène IgG amin'ny endrika fanehoan-kery fanefitra faharoa hiadiana amin'ny antigène. Noho ny fihanaky ny vatan'ny olona iray sy ny maha-antigen manokana azy dia tena nampiasaina tamin'ny fanadihadiana immunological sy ny diagnostika siantifika koa ny IgG. Izy io dia ampiasaina ho toy ny antibody mahazatra amin'ny faritra roa.
Amin'ny ankapobeny, ny IgG dia glycoproteins, izay samy manana rojo polypeptide efatra misy dika mitovy mitovy aminy isaky ny karazany rojo polypeptide roa. Ny karazany roa rojo polypeptide dia maivana (L) ary mavesatra, gamma (γ). Ireo roa ireo dia mifandray amin'ny fatoran'ny disulfide ary koa ny hery tsy manara-penitra.
Ny maha samy hafa ny molekiola immunoglobulin G dia avy amin'ny filaharan'ny asidra amine. Na izany aza, ao anatin'ireo molekiola IgG tsirairay, dia tsy miraharaha ny rojo roa L, mitovy amin'ny rojo H.
Ny anjara asan'ny molekla IgG dia ny famoronana fifandonana eo amin'ny rafitra mpanamboatra vatan'olombelona sy ny antigen.
Firy ny takelaka entin'i Immunoglobulin G (IgG)?
Ny immunoglobulin G (IgG) dia misy takelaka efatra izay tsy mitovy amin'ny fomban'ny fatoran'ny disulfida ary koa ny halavan'ny faritra sy ny andilana. Ireto takelaka ireto dia ny IgG 1, IgG 2, IgG 3 ary IgG 4.
IgG1 kaonty eo ho eo amin'ny 60 ka hatramin'ny 65% ​​amin'ny IgG manontolo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny isotop rehetra mahazatra indrindra ao amin'ny serum maha-olona. Tsara homarihina fa ity kilasy immunoglobulin ity dia manankarena amin'ny antonony izay manampy amin'ny ady amin'ny proteinina manimba sy ny antigène polypeptide. Ohatra iray amin'ireo proteinina izay mifanohitra amin'ny IgG 1 dia ny difteria, ny poizina bakteria tetanus ary proteinina virosy.
Ny zaza vao teraka dia manana ambaratongam-pahefana amin'ny valin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny IgG1. Nandritra ny dingana zaza dia nahatratra ny fifantohany ara-dalàna ny valiny. Raha tsy izany, ny tsy fanatanterahana ny fifantohana amin'io sehatra io dia fanondroana fa mety ho tratry ny hypogammaglobulinemia ny zaza, fikorontanana mitondra tsimokaretina mitranga noho ny tsy fahampian'ny habetsaky ny karazana gamma globulin.
immunoglobulin g subclass 2 tonga faharoa amin'ny resaka isotopes be indrindra ao amin'ny serum olombelona. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 25% eo amin'ny immunoglobulin G. Ny anjara asan'ny immunoglobulin g subclass 2 dia ny fanampiana ny hery voaefy hiady amin'ny antigens polysaccharide toy Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae.
Ankizy iray dia mahavita fitrandrahana immunoglobulin g subclass 2 amin'ny zaza rehefa feno enina na fito taona izy. Ny tsy fahampian'ny IgG2 dia voasaron'ny areti-mifindra matetika ary matetika dia ny zaza.
Tahaka izany koa, amin'ny IgG 1, ny isotopes an'ny immunoglobulin G izay misy ny kapila IgG3 dia manankarena amin'ny antio. Ireo antibiôsy ireo dia manampy ny valin-tenim-pahavalo mba handresena ny proteinina manimba sy ny antigène polypeptide ao amin'ny vatan'olombelona.
Ny 5% ka hatramin'ny 10% amin'ny IgG amin'ny vatan'olombelona dia karazana IgG3. Na izany aza, na dia tsy dia lehibe noho izy ireo raha oharina amin'ny IgG1, indraindray ny IgG3 dia manana fifandraisana ambony kokoa.
Ny isan-jaton'ny IgG 4 amin'ny totalin'ny IgG dia ambany noho ny 4%. Tsara homarihina fa ity subclassin'ny immunoglobulin G ity dia misy amin'ny ambaratonga tena ambany be eo amin'ireo ankizy 10 taona. Ary noho izany, ny tsy fahampian'ny otrikaretina immunoglobulin g subclass 4 dia mety ho an'ny zaza tsy ampy taona folo sy olon-dehibe ihany. .
Na izany aza, ny mpahay siansa dia mbola tsy nahafantatra ny tena fiasan'ny immunoglobulin g subclass 4. Tamin'ny voalohany, nampifandraisin'ny siantifika ny tsy fahampian'ny IgG4 amin'ny alerenan'ny sakafo.
Na izany aza, ny fanadihadiana natao vao haingana dia mampiseho fa ny marary manana pancreatitis sclerosing, pnemonia interstitial na cholangitis dia manana haavony serum IgG4. Noho izany, ny valim-pikarohana dia nanjary nisavoritaka momba ny tena toerana misy azy immunoglobulin g subclass 4.
Ny immunoglobuline mizara ny takelaka mitovy dia manana ny fitoviana eo amin'ny 90% eo amin'ny homolojia, tsy mihevitra ny faritra mety ho azy ireo. Amin'ny lafiny iray, ireo izay anisan'ireo takelaka samy hafa ihany dia mizara fitoviana 60% ihany. Fa amin'ny ankapobeny, miova ny haavon'ny fifantohana amin'ireo salan-tsoratra IgG efatra.
Ny fiasa sy ny tombontsoa azo avy amin'ny immunoglobulin G (Igg)
Ny antibody IgG dia manana anjara toerana lehibe amin'ny valin-kery fanindroany faharoa satria ny antibiôma IgM no miandraikitra ny valin-teny voalohany. Manokana manokana ny antibody immunoglobulin g dia mihazona ny otrikaretina sy ny poizina amin'ny vatanao amin'ny fatorana ny pathogen toy ny virus, bakteria ary holatra.
Na dia io no antibody kely indrindra, dia betsaka ao amin'ny vatan'ny biby mampinono, anisan'izany ny an'ny olombelona. mitentina hatramin'ny 80% amin'ireo antokony rehetra ao amin'ny vatan'olombelona.
Noho ny firafitra tsotra ananany, afaka miditra amin'ny plasenta olombelona ny IgG. Raha ny marina, tsy misy kilasy Ig hafa afaka manao an'izany, noho ny firafitra masinin'izy ireo. Noho izany, dia mitana andraikitra lehibe tokoa izy amin'ny fiarovana ny zaza vao teraka ao anatin'ny volana voalohany anaovana azy. Izany no iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny tombony immunoglobulin g.
Ny molekiola IgG dia mihetsika amin'ireo mpandray vahiny Fcγ izay hita ao amin'ny macrophage, neutrophil ary sela mpono olona voajanahary. Ankoatr'izay, ny molekiola dia mahay manentana ny rafitra mifameno.
Ny rafitra mifameno dia tafiditra ao anatin'ny rafi-kery fanefitra ary ny anjara asany lehibe dia ny fanatsarana ny sela ny sela sy ny phagocytic sela hanala ireo mikraoba sy sela maratra amin'ny vatan'olombelona. Manatsara ny fahaizan'ny antibody sy ny sela ny rafitra hanimba ny membra cellan'ny pathogens sy hampihena azy ireo. Izany dia misy tombony azo avy amin'ny immunoglobulin g.
Ny vatanao dia miteraka ny antibody immunoglobulin g amin'ny valin-kafarana hampiato ny aretina. Ny vatana dia afaka mitazona io antibody io mandritra ny fotoana maharitra hanampiana amin'ny tsy hiadiana amin'ny pathogens tompon'andraikitra amin'ny otrikaretina fa manamora ny fanesorana ireo zavatra simba amin'ny rafitrao koa.
Noho ny fiaretan'ny serum avo dia ny IgG no antonony mahery vaika indrindra ho an'ny tsimokaretina pasifika. Raha izany no izy, IgG ny ankamaroany dia marika fa voan'ny otrikaretina ianao na nanao vaksiny vao haingana.
Ny fampiasanaGG Powder sy ny fampiharana
Ny vovony IgG dia famenon-tsakafo voadio feno izay loharano manankarena immunoglobulin G (IgG). Izy io dia manolotra ny fijerin'ny IgG avo indrindra indrindra hanampiana ny vatanao hanana valin-kery mahery, indrindra raha manana olana mifandraika amin'ny alikaola ianao.
Iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny IgG Powder dia colostrum bovine izay manome zavamiaina ara-boajanahary feno tanteraka. Ireo immunoglobulin ireo dia mifototra amin'ny antibiôtika isan-karazany, ao anatin'izany ny immunoglobulin G (IgG). Noho izany, ny immunoglobulin g colostrum dia fomba mahomby hanamafisana ny hery fiarovana ny vatan'olombelona hiadiana amin'ny aretina.
Miaraka amin'ny immunoglobulin g colostrum ho toy ny singa lehibe aminy, ny IgG Powder dia afaka manome ny 2,000 mg mg ny IgG isaky ny manompo. Ny vovony dia manome proteinina anao (4 g isaky ny fanompoana)
Indrindra fa ny immunoglobulin g colostrum ao anaty vovony dia nosedraina ary nanaporofo ny fanampiana ny olona hitazona ny hery fiarovana tsimokaretina mahery vaika. Mahatonga azy io amin'ny alàlan'ny fatorana mikraoba sy poizina be dia be ao am-boany moka.
Noho izany, ny soa azo avy amin'ny immunoglobulin g dia misy:
Fanatsarana ny fanodinana fanefitra
Sakana matanjaka (GI) mahery vaika
Ny fikojakojana ny fifandanjana mahazatra
Ny fanampiana ara-pahasalamana amin'ny zaza vao teraka
Misonosolo ny hery fiarovana ny zaza, noho ny famatsiana immunoglobulin tsy nitera-doza
Fikojakojana ny fifandanjana mikraoba
Tsy misy fatrany vita amin'ny vovony IgG izay voaporofo ara-tsiansa fa izy no mety. Na izany aza, ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana dia manoro hevitra fa misy na maromaro na sôkôlà vita amin'ny vovony isan'andro isan'andro Ampio ny vovony IgG amin'ny rano 4 taonina / zava-pisotro tianao indrindra na arakin'ny dokotera anao.
Tsy fahampiana immunoglobulin G (Igg)
An Ny tsy fahampian'ny immunoglobulin G (IgG) dia manondro toe-pahasalamana mampiavaka ny famokarana Immunoglobulin G tsy ampy. Rehefa manana kilema IgG ny olona iray dia mihamitombo ny aretina mahazo azy satria malemy ny hery fanefitra ao aminy.
Mampalahelo fa ny tsy fahampian'ny immunoglobulin g dia mety hisy fiantraikany aminao amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainanao, tsy misy vanim-potoana ialana amin'izany fepetra izany.
Tsy nisy olona nahavita namantatra ny tena antony mahatonga ny tsy fahampian'ny immunoglobulin g. Na eo aza izany dia tena ahiana tanteraka fa misy ifandraisany amin'ny fototarazo. Ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana koa dia mino fa misy fanafody sy fepetra ara-pitsaboana izay mety miteraka tsy fahampiana IgG.
Ny fitiliana ny tsy fahampian'ny immunoglobulin g dia manomboka amin'ny alàlan'ny fitsirihana ny ra iray handinihana ny haavon'ny immunoglobulin. Avy eo, ny fitsapana sarotra hafa izay misy ny fandrefesana ny haavon'ny antibody mba hamaritana ny valin'ny vatana amin'ny vaksiny manokana dia atao amin'ny olona voarohirohy voan'ny aretina.
Symptoms immunoglobulin G
Ny olona iray tsy ampy immunoglobulin g dia mety hiseho amin'ireto soritr'aretina manaraka ireto:
Areti-mifindra toy ny otrikaretina sinus
Ny otrikaretina digestif
Voan'ny aretin'ny ati-doha
Areti-mifindra mahatonga aretin-tenda
areti-po mafy sy mety maty (amin'ny tranga tsy fahita firy)
Amin'ny tranga sasany dia mety hanelingelina ny fiasa mahazatra amin'ny làlan-drivotra sy ny havokavoka ny otrikaretina etsy ambony. Vokatr'izany dia mahita fahasahiranana fifohana rivotra ny traboina.
Ny teboka iray marihina momba ny areti-mifindra nateraky ny tsy fahampiana IgG dia ny hoe izy ireo dia afaka manafika na dia ireo olona efa voan'ny vaksiny tamin'ny pnemonia sy ny gripa.
Ahoana no fomba hitondrana ny tsy fahampiana IgG?
Ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny IgG dia misy fomba samihafa, tsirairay avy arakaraka ny hamafin'ny soritr'aretina sy ny areti-mifindra. Raha malemy ny soritr'aretina, midika izany fa manakana anao tsy hitohy amin'ny hetsika / asa mahazatra ataonao, dia ho ampy tsara ny fitsaboana haingana.
Na izany aza, raha mafy ny areti-mifindra dia matetika no vahaolana tsara. Ity fikolokoloana fitsaboana maharitra ity dia mety hampiditra fanafody antibiotika isan'andro mba hiadiana amin'ny otrikaretina.
Amin'ny tranga lehibe, ny fitsaboana immunoglobulin dia mety hitranga amin'ny fomba mahomby.
Ny fitsaboana dia manampy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovana, ka manampy ny vatana hiady amin'ny otrikaretina bebe kokoa. Izy io dia miditra amin'ny fitrandrahana ranoka antibody (immunoglobuline) na vahaolana ao ambanin'ny hoditry ny marary iray, ao anaty hozatra na ao amin'ny masony.
Ny fampiasana vovony IgG dia mety hahita olona sitrana noho ny tsy fahampiana IgG koa.
Aorian'ny fitsaboana immunoglobulin dia mety hanimba ny vatanao amin'ny immunoglobulin g.
Ny fiantraikany lehibe indrindra amin'ny immunoglobulin g dia misy:
Fanaintainana eo amin'ny toerana tsindrona
Ny voka-dratsin'ny immunoglobulin g matetika dia:
Rehefa lehibe loatra ny immunoglobulin igG
Too ambony IgG ambaratonga no hita ao amin'ny systemus lupus erythematosus, valan'ny vavahadin'ny atrophic, cirrhosis, hepatitis mavitrika, rheumatoid arthritis, endocarditis bakteria subacute, myeloma marobe, tsy Hodgkin lymphoma, hepatitis, cirrhosis, ary mononukleosis.
Ny haben'ny immunoglobulin mahery vaika IgG dia azo tsikaritra ao amin'ny IgG-, ny fihanaky ny valan'aretina sasany (toy ny tsimok'aretina VIH sy cytomegalovirus), ny sela misy ny sela, ny aretin'ny gliôma monoclonal gamma ary ny aretim-po.
Rehefa ambany ny immunoglobulin igG
immunoglobulin g ambany dia miteraka olona mety hitombo ny aretina matetika. immunoglobulin g ambany dia afaka hita amin'ny tsy fahampian'ny antibiôtôme, ny immunodeficiency syndrome, tsy Igel maro be myeloma, aretina matevina, aretina matevina na aretin'ny nephrotic.
Ny ambaratonga tena ambany be dia be ihany koa ny tsikera amin'ny karazana leukemia sasany, ny ratra may, ny eczema, ny aretin'ny voa, ny sepsis, ny tsy fahampian-tsakafo, ny pemphigus, ny tonony ary ny tsy fahampian-tsakafo.
Rehefa mahomby ny immunoglobulin IgG
Raha ny tsara immunoglobulin IgG ho an'ny antigen mitondra otrikaretina toa ny Covid-19 na dengue, izany dia famantarana fa ny olona izay eo ambanin'ny fitsapana dia mety ho tratry ny otrikaretina voakasik'izany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ary koa, ny valin'ny immunoglobulin g dia mampiseho fa afaka nahazo vaksiny ilay olona vao niaro azy tamin'ny otrikaretina.
Noho izany, ny valin'ny immunoglobulin g dia mariky ny fitomboan'ny loza ateraky ny olona iray amin'ny otrik'aretina mifandray amin'ny antigen izay mandray anjara amin'ny fanandramana tsara. Izany indrindra indrindra raha ny vokatra tsara dia tsy vokatry ny vaksiny iray.
Nahoana Is Immunoglobulin G (Igg) Ilaina ilaina amin'ny zavatra atao amin'ny fiainana?
Ny immunoglobulin G (IgG) dia ilaina tokoa amin'ny hetsika eo amin'ny fiainana satria izy no mitana andraikitra lehibe indrindra amin'ny fitazonana ny fahasalamana ny olona sy hahafahany manohy ny asany mandritra ny fiainany raha ampitahaina amin'ny immunoglobulin hafa.
Marihina fa ny antibody IgG dia misy tsiranoka amin'ny vatana rehetra, hoy ny ranomaso, ny urina, ny ra, ny fivaviana ary ny toy izany. Raha jerena izany dia tsy mahagaga raha izy ireo no antom-pivarotana fahita indrindra, kaonty 75% ka hatramin'ny 80% amin'ny fitambaran'ny antibody rehetra ao amin'ny vatan'olombelona.
Miaro ny tapitry ny vatana / taova izay mifandray amin'ireo tsiranoka ireo amin'ny otrikaretina bakteria sy viriosy ireo antibody. Noho izany, raha tsy misy ny haben'ny IgG dia tsy afaka manatrika amim-pahombiazana ny fanatrehana ny asa fanaonao andavan'andro, noho ny areti-mifindra miverimberina.
Ankoatr'izay, zava-dehibe ny IgG amin'ny famerenan'ny olombelona. Amin'ny maha-kely indrindra amin'ny antokony rehetra ary manana rafitra mora be, dia io ihany no antibody afaka mameno ny plasenta amin'ny vehivavy bevohoka. Noho izany, izy irery no antonony izay miaro ny zaza tsy miteraka amin'ny tsimok'aretina sy ny bakteria. Raha tsy misy izany dia maro ireo zaza tsy miteraka no atahorana hampivoatra ireo toe-pahasalamana isan-karazany, ary mety hampidi-doza na hahavelona aina ny sasany.
Is Misy fifandraisana hafa eo anelanelan'ny immunoglobulin G Ary ny Lactoferrin?
Samy immunoglobulin G sy lactoferrin dia singa manan-danja amin'ny ronono bovine (avy amin'ny olona sy omby). Tahaka ny immunoglobulin G, ny fikarohana dia mampiseho fa ny lactoferrin koa dia tafiditra amin'ny fiarovana isan-karazany ao amin'ny vatan'olombelona.
Izy dia manampy ny vatana hiady amin'ny microorganism pathogen toy ny bakteria, viriosy, ary koa ny areti-mifindra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mampisondrotra ny fiasan'ny vatan'olombelona. Noho izany, ny famatsiana lactoferrin dia afaka mameno ny vovoka immunoglobulin G amin'ity asa ity.
Na izany aza, lactoferrin dia manana fiasa fanampiny; fehezana vy ary fitaterana.
Bebe kokoa Fampahalalana momba ny immunoglobulin
Rehefa mba hizaha immunoglobulins?
Amin'ny fotoana iray dia mety ny dokotera dia mety hanome torohevitra fa hanao fisedrana immunoglobulin ianao, indrindra fa mihevitra izy fa ambany loatra ny habetsaky ny immunoglobulin. Ny fitsapana dia mikendry ny hametraka ny habetsaky ny immunoglobulin ao amin'ny vatanao.
Indrindra fa fitsapana immunoglobulin no atoro raha manana:
Ny aretina miteraka miverina, indrindra fa ny fanaintainan'ny vavony, ny havokavony, ny vavony, na ny tsinay
Fivalanana / maharitra otra
Ny fihenan'ny lanjan'ny lanjany
ny hodiny amin'ny hoditra
Tantara momba ny tsy fahampiana fianakaviana
Mety ho hitan'ny dokoteranao fa fahendrena ny manoro fitiliana immunoglobulin ho anao raha narary ianao taorian'ny fitsangatsanganana.
Ny fitiliana ra immunoglobuline dia ampiasaina hanampiana amin'ny fitiliana ny toe-pahasalamana isan-karazany toy ny:
Areti-mifindra sy viriosy
Immunodeficiency: Ity dia toe-javatra iray naseho ny fihenan'ny vatan'olombelona hiady amin'ny aretina sy ny aretina
aretim-paritra toy ny arthritis rheumatoid sy lupus
karazana homamiadana toa ny myeloma marobe
Voanny zaza vao teraka
Ahoana ny fanatanterahana ny fitsapana?
Ity fitsapana ity matetika dia misy fandrefesana ireo karazana immunoglobulin telo malaza indrindra; IgA, IgG, ary IgM. Ny telo no refesina mba hanomezana sarina ny dokotera ny fahombiazan'ny valin-teninao.
Ny santibary-ra anao no ho santionany amin'ity fitsapana ity. Noho izany, ny teknisianina lab dia hanosika fanjaitra ho faritra iray amin'ny sandrinao mba hahatratrarana ny iray amin'ireo lalan-drà miafina. Avy eo, ny teknisianina dia mamela ny ra hiangona ao anaty fantsona na kovaly mipetaka amin'ny fanjaitra.
Raha tsy izany, dia mety hisafidy ny santionany amin'ny tsiranoka cerebrospinal (CSF) ny dokotera fa tsy rà ho an'ny fitsapana. Raha hazavaina, ny tsiranoka cerebrospinal dia ny tsiranoka manodidina ny tadim-bolo sy ny atidohanao. Ny teknisianina ataonao dia hampiasa fomba iray antsoina hoe lumbar puncture hanesorana ilay tsiranoka amin'ny hazondamosinao.
Ny fitrandrahana santionany amin'ny tsiranoka dia mety mampalahelo. Na izany aza, ny manampahaizana tafiditra amin'ny fomba fiasa toy izany ao an-toerana mba hahatonga ny tranokala voan'ny aretina eo amin'ny vatana dia tsy mahazaka fanaintainana. Ka ny zavatra voalohany ataon'ilay teknisianina aminao dia ny hanindrona zava-mahadomelina an-tsokosoko voatifitra ao an-damosinao mba hampita ny fanaintainana rehetra.
Avy eo, hangataka aminao ny manam-pahaizana momba ny labera fa handry eo amin'ny ilanao eo amin'ny latabatra ianao ary avy eo hampitraka ny lohalika ho amin'ny fitsapana anao. Raha tsy izany, dia angatahina hipetraka eny ambony latabatra ianao. Rehefa ao anatin'ny iray amin'ireo toerana roa ianao, ny teknisianina dia afaka hahita ny vertebrae hazondamosinao ambany roa.
Ny eo dia izao, ny teknisianina dia mametraka fanjaitra matevina eo afovoany amin'ny laharanao fahatelo sy fahefatra lumbar. Avy eo, manangona fanjaitra matevina ao anaty fanjaitra matevina ny habetsaky ny tsiranoka cerebrospinal anao. Rehefa afaka segondra vitsy, dia hanintona ny fanjaitra miaraka amin'ilay tsiranoka voangona ao anatiny ny teknisianina.
Farany, ny santionan'ny tsiranoka dia apetraka amin'ny kitapom-panafody azo ampiharina momba ny immunoglobulin.
Ny immunoglobulin G (IgG) dia anisan'ireo immunoglobulin lehibe hafa ao amin'ny vatan'olombelona. Ny sasany dia ny IgA, IgD, IgE, ary koa ny IgM. Na izany aza, amin'ireo karazana immunoglobuline efatra, ny IgG no kely indrindra nefa fahita indrindra ary manan-danja ao amin'ny vatana. Izy io dia misy amin'ny tsiranoka rehetra hanohanana ny hery fanefitra amin'ny ady ataon'izy ireo amin'ny bakteria (bakteria sy viriosy).
Ny ambany indrindra na avo lenta amin'ny immunoglobulin G dia ratsy ho an'ny fahasalamanao. Raha misy ny tsy fahampian'ny immunoglobulin g, a Mividy vovoka IgG Ny fampiasana dia mety ho dingana iray hanasitranana anao.
Saadoun, S., Waters, P., Bell, BA, Vincent, A., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Ny tsindrona intra-cerebral amin'ny neuromyelitis optica immunoglobulin G ary ny famenon'ny olombelona dia miteraka lesoka neuromyelitis optika. ati-doha, 133(2), 349-361.
Marignier, R., Nicolle, A., Watrin, C., Touret, M., Cavagna, S., Varrin-Doyer, M., ... & Giraudon, P. (2010). Oligodendrocytes dia simba amin'ny neuromyelitis optica immunoglobulin G amin'ny ratra astrocyte. ati-doha, 133(9), 2578-2591.
Berger, M., Murphy, E., Riley, P., & Bergman, GE (2010). Ny hatsaran'ny fiainana, ny haavon'ny immunoglobulin G, ary ny fatran'ny aretina amin'ny marary manana aretina immunodeficiency voalohany mandritra ny fikarakarana tena amin'ny immunoglobulin subcutaneous. Gazetim-pitsaboana atsimo, 103(9), 856-863.
Radosevich, M., & Burnouf, T. (2010). Intravenous immunoglobulin G: fironana amin'ny fomba famokarana, fanaraha-maso kalitao ary fanamafisana ny kalitao. Vox sanguinis, 98(1), 12-28.
Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). Immunoglobulin G: fitsaboana mety hampihenana ny neuroinflammation manaraka ny ratra amin'ny hazondamosina. Journal of immunology klinika, 30(1), 109-112.
Bereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, H., & Denizli, A. (2010). Volom-borona Poly (glycidyl methacrylate) amina kristaly natao ho an'ny fihenan'ny fangalarana mombamomba ny pseudo-manokana sy immunoglobulin G. Siansa sy injeniera momba ny fitaovana: C, 30(2), 323-329.